Neymar, Pogba, De Gea, Van Gaal, Ospina & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2018 February Suuqa, Wararka Maanta Neymar, Pogba, De Gea, Van Gaal, Ospina & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
Xiddiga Kooxda Paris St-Germain ee Neymar oo 26 jir ah ayaa kooxda Real Madrid u sheegay in uu doonayo in miiska loo saaro mushahar ka badan midka uu haatan Cristiano Ronaldo ka qaato kooxda hadii ay doonayaan in uu ku soo biiro Bernabeu (Sunday Express).
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Man United Paul Pogba ayaa diyaar u ah in uu isaga tago kooxda Man United hadii uu Jose Mourinho sii joogayo kooxda (Sun On Sunday).
Kooxda Man United ayaa la socota xaalada xiddiga khadka dhexe ee kooxda Lazio Sergej Milinkovic-Savic oo 22 jir ah laguna qiimeeyo 80 milyan oo euro (Sunday Mirror).
Goolhayaha kooxda Man United ee David De Gea ayaa doonaya mushahar dhan 350 kun oo Gini todobaadkii si uu u sii Joogo Old Trafford, 27 jirka reer Spain ayaa haatan qaata lacag dhan 180 kun todobaadkii (Sun On Sunday).
Tababarihii hore ee kooxda Man United Louis van Gaal ayaa si lama filaan ah hogaanka ugu qabtay tababarayaasha shaqada ka badali doona Antonio Conte hadii xiriirka u dhexeeya tababaraha iyo maamulka Blues sii xumaado (Sunday Mirror).
Daafaca ugu qaalisan taariikhda Man city ee Aymeric Laporte oo 23 jir ah ayaa sheegay in uu ku saxnaa in uu Man city iska diido 18 bilood ka hor (Sunday Telegraph).
Tababaraha Kooxda Man City Pepe Guardiola ayaa sheegay in uu xiddigihiisa u diidi doono in ay ku dabaal degaan khamri hadii ay ku guulaystaan koobka Carabao cup-ka isaga oo isla markaasba bilaabi doona in uu xiddigihiisa u diyaariyo kulanka Ay Arsenal la ciyaari doonaan khamiista (Independent on Sunday).
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Watford ee Abdoulaye Doucoure oo 25 jir ah ayaa sheegay in uu soo dhawayno xiisaha uga imanaya kooxda Arsenal iyo Liverpool xagaaga (L’Equipe).
Goolhayaha kooxda Arsenal ee David Ospina oo 29 jir ah ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu kooxda Arsenal ka tago xagaaga hadii uu dalab u yimaado (Daily Star Sunday).
Kooxda Real Madrid ayaa isku diyaarinaysa in ay u dhaqaaqo adeega xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Man United ee Anthony Martial xilli heshiiska 22 jirku kula jiro Man United uu dhacayo xagaaga (Marca)